Njikere, Ọkụ, Ebumnuche | Martech Zone
Anyasị a bụ nnukwu abalị nọrọ na ụfọdụ ndị maara nke ọma ahịa, ọrịre na ahịa ọkachamara. A kpọbatara anyị n'otu ụlọ oriri na ọ niceụ veryụ mara mma nke ukwuu n'otu ọnụ ụlọ nke onwe. Ebumnuche nke nzukọ ahụ bụ iji nyere onye ọrụ ibe m aka nke chọrọ ịkwalite azụmahịa ya n'ọkwa ọzọ… ma ọ bụ ọkwa ole na ole gafee ebe ọ dị ugbu a.
Enwere otutu nkwekọrịta n'ime ụlọ… chọpụta ihe ọ bụ na ị na-eme n'otu ahịrịokwu, chọpụta àgwà ndị dị iche na gị, mepee usoro ịre ọrụ gị dabere na uru ị wetara, jikọọ na netwọkụ gị iji chọpụta atụmanya kachasị elu iji zụọ ahịa na ịzụlite akara nke gụnyere ihe ị na-eweta na tebụl.
Anaghị m ekwenye na nke a… mana nke ahụ bụ ụfọdụ ezigbo ọrụ kpụ ọkụ n'ọnụ, ọ bụghị ya? Nwere ike ịrụ ọrụ ọtụtụ afọ na ihe ndị a… wee laghachi na ụlọ ịbịaru n'ihi na ị nweghị ihe ịga nke ọma.
Na nkwanye ugwu dị ukwuu nye ndị ọrụ ibe m, enwere m obi abụọ oge ọ bụla mgbe ndị ọkachamara na-enye ụdị atụmatụ na ndụmọdụ a. Ejiri m obi eziokwu na-arụ ọrụ na na ngalaba azụmaahịa ihe karịrị afọ iri abụọ ugbu a ma enweghị m ike icheta otu atụmatụ azụmaahịa na-arụ ọrụ ka atumatu.
N'ikwu eziokwu niile, echere m na ọtụtụ okwu a bụ naanị poppycock.
Ọ bụ kpam kpam iberibe… Ekwenyere m na-eche echiche putara ighe dị mkpa. Emechakwa, ọ dị mkpa ka ị mata ebe ntụzịaka izugbe ahụ dị tupu ịdọpụta ihe na-akpali akpali. Agbanyeghị, ọ ga-akara m mma ma mmadụ buru ụzọ gbaa ọkụ wee nwee ebumnuche karịa ịrụ ọrụ ọnwa ole na ole iji tọọ egbe nke nwere ike ọ gaghị akụ bullseye ma ọlị.
M na-ahụkarị ka azụmaahịa na-ada tupu ha amalite n'ezie. Ha na-atụ ụjọ ọdịda nke na ha na-akpọnwụ ma na-agaghị etinye ihe egwu dị mkpa iji gaa n'ihu. Legharịa anya na azụmahịa ndị na-aga nke ọma. Hà na-eme nke ọma n’ihi na ha mere atụmatụ n’ụzọ na-enweghị ntụpọ? Ma ọ bụ ha na-enwe ihe ịga nke ọma n'ihi na ha dị gara gara ma nwee ike ịhazigharị atụmatụ ha dị ka ihe achọrọ maka atụmanya ha, ndị ahịa ha na ụlọ ọrụ ha chọrọ?
Gịnị bụ echiche gị? Ahụmahụ?
Tags: ebumnucheanalysisọkụmarketing atụmatụnjikere
Ọkt 25, 2010 na 11:03 PM
Echere m na ị ziri ezi maka ọtụtụ akụkụ. Ọ dị m ka ọ dabere na ihe ị na-eme yana obi ike ị nwere na ihe bara uru ịkwalite. Ihe m na-ekwu bụ na mgbe ụfọdụ ọ na-adị oke nkpa iji nweta usoro eji arụ ọrụ ebe enwere ntuziaka na ebumnuche. Ọ na - enyere ndị na - eme atụmatụ a aka ọfụma. Agbanyeghị, n'ime atụmatụ ahụ, ọ ga-adị mkpa karịa igbu karịa atụmatụ. Usoro mbu nwere ike ichighari na ihe nke ubochi. Nke ahụ chọrọ mgbanwe ngwa ngwa.
Iji tulee ihe atụ gị miri emi karị, chee ma ọ bụrụ n’inweghi ebum n’uche tupu ịchụpụ. Nwere ike ịkụtu ihe ị chọrọ, mana ị nwere ike ịhapụ kpamkpam, ma ọ bụ kụọ enyi, ma ọ bụ onwe gị. Ọ bụ ya mere m na-eche na nke a bụ dabere na otú obi ike ị bụ banyere echiche ma ọ bụ azụmahịa (otú nnukwu lekwasịrị bụ).
Ya mere, iji kpokọta ya ọnụ-na gburugburu asọmpi a anyị nọ na ya, anyị kwesịrị ịsọ ọsọ na ebumnuche na ọkụ, wee chọgharịa ma gbanye ọkụ ọzọ, wee tụgharịa ma gbanye ọkụ ọzọ. Ma obu… weta egbe agha.
Ọkt 25, 2010 na 11:04 PM
M nọnyeere gị na nke a. Ebe m si na ọkara nnukwu nzukọ ebe e tụrụ ọsọ na ọnwa na ọkara afọ na "atụmatụ + inweta ya" ziri ezi bụ ụlọ ọrụ afọ 15 ahụrụ m uru ọ bara ịdị gara gara ka anyị bidoro itinye usoro ọhụụ n'ọrụ nke azụmahịa anyị. . Ugbu a na-agba ahịa maka mmalite nke bụ, mgbe m malitere, obere karịa ndị ahịa ahịa nke rụụrụ m ọrụ gị dị mkpa karịa. Ahụmịhe nke ndị isi otu otu kwesiri ịkọpụta gị n'ụzọ ziri ezi. Agbụ onye na-eme ngagharị ma na-akawanye mma mgbe niile bụ maka ịdị mma ọrụ… dị oke mkpa dị mkpa yana elegharakarị nka maka ndị na-eto eto.
Ọkt 25, 2010 na 11:10 PM
Kpamkpam kwenyere, Brian! Ihe na-eju anya bụ na m na-etinye oge ka ukwuu n'oge m na-agụ ma na-amụ nsonaazụ nke ndị ọzọ ka m wee mara ụzọ ebumnuche 'kwesịrị ịbụ'. Naanị m na-echegbu onwe m na ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị ewere nzọụkwụ mbụ. Ha adighi ada ada ozugbo site na uzo ozo… ma ha na emecha daa dika ndi ozo na-agafe ha.
Ọkt 25, 2010 na 11:24 PM
Ee ekwenyere m. Ahụbeghị m ahịa ahịa nke ọma mana m na-anụ akụkọ banyere ụlọ ọrụ ndị toro eto na-agbasi mbọ ike na mbọ azụmaahịa mbụ. Naanị ha enwetaghị ya yabụ atụmatụ niile dị n'ụwa anaghị enyere ha aka ịmụta ezigbo nkuzi ha chọrọ iji wee chọwa ma gbaa ọzọ ma ha ekwuteghị ọsọ ọsọ iji dozie nsogbu ahụ.
Site n'ụzọ, nke ahụ bụ nnukwu ihe atụ. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na nke a. Bụ eziokwu banyere nanị ịmata ebe lekwasịrị anya na ejiri m n'aka na ị nwere ezigbo nghọta maka nke ahụ. Peoplefọdụ ndị anaghị eme ya. Knowsnye maara ma ọ bụrụ na atụmatụ na-enyere aka, mana nwoke enwere ụfọdụ ndị na-agbapụ onwe ha n'ụkwụ na ahịa ha. (Ekwesịrị m ikwu ya, ọ dabara nke ọma)
Ọkt 26, 2010 na 12:30 AM
Doug enweghị m ike ikwenye karịa gị. Na isi nke onye m bụ: ENTREPRENEUR. Banyere ndị ọchụnta ego na-agakwa, m na-achọ ịlele ọdịnihu ma na-eme ihe ọ bụla dị mkpa iji ruo ebe ahụ. Ekwere m na atumatu. Ekwere m na nhazi. Agbanyeghị, ekwesịrị m ikwupụta na enwebeghị m “atụmatụ azụmahịa” ọdịnala.
Otu afọ gara aga mụ na nwa nwoke nwere mkparịta ụka. Anaghịdị m echeta aha ya. Anyị zutere maka oge mbụ na nzukọ ụtụtụ anyị abụọ gara na Castleton, Indiana. Ọ bụ otu n'ime "nkwupụta-na-na-adọba ụgbọala-nza-maka-a-awa-mgbe-ị-dị nnọọ zutere-mkparịta ụka" na n'ụzọ ụfọdụ anyị na-na na isiokwu nke na-eke a azụmahịa plan. Ekwupụtara m ya na enweghị m atụmatụ atụmatụ azụmahịa ọdịnala. Ọ jụrụ m "you na-eme atụmatụ n'oge na-adịghị anya ịga nweta ego site na ụlọ akụ maka obere azụmaahịa gị?" M zara ya, sị, “Mba.” Mgbe ahụ, echegbula onwe gị gbasara atụmatụ azụmahịa, o kwuru. Na isi, ọ gwara m "Ọkụ na Ebumnuche." Ọ gbara m ume ịgbaso mmụọ azụmaahịa m ma pụọ ​​ma nwee ọganiihu.
Ya mere Doug nke ahụ bụ ihe m nọ na-eme kemgbe afọ 3 gara aga kemgbe m malitere Cross Creative na Ọktọba nke 2007. Ya mere, ụbọchị ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ m na ụlọ ọrụ m na ọtụtụ afọ nke ọma anyị abụọ ka anyị na-agba mbọ ijere agụụ mmekọahụ ndị na-akpali akpali bulie anyị elu kwa ụbọchị ọ bụla! Ọ bụ nnukwu ụbọchị ịbụ onye ọchụnta ego.
Ọkt 26, 2010 na 6:55 AM
Kpamkpam kwenyere, Doug. Mkpọnwụ nyocha abụghị naanị ihe mgbaàmà nke nnukwu ụlọ ọrụ. Ọtụtụ ndị nwere obere azụmaahịa na-atụ ụjọ ịmegharị ihe na-adịghị mma. Omume, yana usoro iji nyochaa ihe ịga nke ọma, bụ atụmatụ dị mma. Fortune na-akwado ndị nwere obi ike.
Ọkt 26, 2010 na 1:07 PM
M kwetakwara Doug, Mgbanwe bụ aha egwuregwu taa. Echiche dị oke mkpa taa ga-agụnye ike ịmegharị ngwa ngwa na ahịa na-agbanwe agbanwe.
Ọkt 26, 2010 na 3:19 PM
Nke a bụ ya mere na ihe ịga nke ọma n'ezie oru buu igba n'ulo na-amalite ulo oru… mgbe ahụ na-ere ha na strategists na-ekwu okwu nke ukwuu "poppycock" ka mgbe malitere otu na ha.